Aah zvebonde re2minutes handichada – Married Woman Complains! | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Aah zvebonde re2minutes handichada – Married Woman Complains!
Aah zvebonde re2minutes handichada – Married Woman Complains!
Aah zvebonde re2minutes handichada – Married Woman Complains! Kana ndimiwo ndinobvisira hembe dzese 2 minutes here? No ndaramba, something had to be done. Last week ndakaenda kuSouth African ndokunotenga a nice lingerie suit kangu ndikati ndinoda kumbofadza daddy.
I came back ndokunyatsoseta mood daddy varikubasa kubika kanice meal ndakamirira mudiwa wangu. Akasvika ndichimutambidza a chilled glass of wine, not your normal cheap stuff but a nice pinotage.
As he sipped his wine ndakabvisa bhachi reSuit ndichiti daddy garai apo, table yakazara twuma eats nema nuts zvinonanaka including kaspicy biltong. Ndakati nhasi mudiwa wangu ndoda kukubata bho ndichibvisa gown that I had on. Mururme akatarisa kaLingerie suit kangu ndikaona achisekekera ndikaziva kuti Daddy approves.
Ndakaona kuti murume anakirwa ndikati pamwe nhasi ndinozvamburwa nayo nyoro. Ndakagara pamakumbo aDaddy ndichivadyisa maeats alongside kaWine and ndakaona kuti murume arikuita comfortable. Ndakatambisa garo kudai ndikanzwa ichimira pasi pangu ndikaziva kuti haa nhasi kunofiwa. Ndakanzwa ndichizara nyere ndikati let me take it a step further and I whispered in his ear ndikati “daddy nhasi ndoda kukupai rese!”
Ndakanzwa murume mukuru achidedera ndikati nhasi kunofiwa chete and I was encouraged and took control. I told him ipapo ndikati “zvako zviya zvema 2minutes wapedza nhasi hakuna tinopedzerana!” I had a serious face and he knew I meant it and I wasn’t taking any funny business. Shuwa kugarira 2 minutes apa ndine zvimashamwari zvinovhaira kuti varume vazvo vanozvirova for hours. Bodo ndakaramba ipapo and ndakaona rume richita take charge ndikaziva kuti wangu murume adzoka and is prepared to step up his game.
Ndakasekera ndikati handidi zvanhasi chete, I am tired nezvima2 minutes everyday. Iya akabva aseka akati, “make sure I receive same treatment everyday” Ndakamupa ziso and I noticed he was serious and that is when I noticed kuti maybe sometimes us as woman we cause this trouble for ourselves. Imagine daddy vabva kubasa kuna stressful boss and instead of us being supportive we add to the stress level. Kufunga kwako daddy vanoperformer here or vanenge vakuti let me just do ndipedze. Food for thought ladies….
But also kune vamwe varume varilazy and selfish vanongozvifunga chete pabonde and once achingopinda akutotunda shuwa kubvisa hembe dzese for that 1 minute. Take charge ladies udza murume wako or boyfriend yako kuti kani iwe usina kundunda iye is not allowed kutunda… FINISH.
Since then relationship yedu has improved pabonde, I make sure kuti murume anosvika akacharger kare, a picture during lunch hour to make him know I am waiting for him does wonders even to the stresses of work. I found my solution, ladies find yours too.
Thank you for sharing my story – Emma
Married Woman Complains
Previous articleHelp ndakarova nyoro munhu asiriye
Next articleNyoro paHoliday Inn while boyfriend is away – Chihure Kunaka